“ဟိုတုန်းက ကြားခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဖွယ် တေးသံသာတွေဟာ အခုတော့ဖြင့် ………. ´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဟိုတုန်းက ကြားခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဖွယ် တေးသံသာတွေဟာ အခုတော့ဖြင့် ………. ´´
“ဟိုတုန်းက ကြားခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဖွယ် တေးသံသာတွေဟာ အခုတော့ဖြင့် ………. ´´
Posted by ခင်ခ on Mar 23, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary | 31 comments
“အရှေ့အရပ်၌ရှိသော အနန္တစင်္ကြ၀ဋာ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ ကြောင့်ကြခတ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
အနောက်အရပ်၌ရှိသော အနန္တစင်္ကြ၀ဋာ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ ကြောင့်ကြခတ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
တောင်အရပ်၌ရှိသော အနန္တစင်္ကြ၀ဋာ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ ကြောင့်ကြခတ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
မြောက်အရပ်၌ရှိသော အနန္တစင်္ကြ၀ဋာ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ ကြောင့်ကြခတ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။
ရန်ကုန်- မန္တလေး အဝေးပြေးအမြန်လမ်းကြီးမရှိသေးတဲ့ ဟိုတုန်းအခါ ကာလတုန်းက ခင်ခ ရန်ကုန်ကနေ အဝေးပြေးကား စီးပြီး မန်းပြန်တဲ့အခါ မနက် ၄ နာရီ နဲ့ ၅ နာရီကြားဝန်းကျင် မိတ္ထီလာမှာ မနက်မျက်နှာသစ် မနက်စာ စားဖို့ ရပ်ပေးခဲ့တဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေက ဖွင့်ခဲ့တဲ့ ကြည်နူးဖွယ်သံသာလေးတွေ အဲဒီကနေ မန်းကိုဆက်မောင်းလို့ မိတ္ထီလာမြို့ထဲဖြတ်တဲ့အခါလည်း စောစောဖွင့်ထားတဲ့ လဘက်ရည်ဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေဆီကလည်း အခုလို မေတ္တာပို့တေးသံတွေနဲ့ ဖြတ်သွားရင်းကြည်နူးခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလောက်ကစပြီး အဲလိုကြည်နူးဖွယ် မေတ္တာပို့တေးသံသာတွေ ရပ်နားခဲ့ပြီး
“ ဟေး ချပလိုက်´´
“ဟိုမှာ ကုလား ကုလား´´
“ချကွာ ရှို့ကွာ ဟေး ဟေးးးးးးးးးးးးးးးး´´
“ဘာကောင်တွေလည်းကွ ဒီလိုစော်ကားလို့ရမလား ဒါမျိုး ဒို့မခံဘူး´´
စသည်ဖြင့် ကြမ်းတမ်းလိုက်ကြတဲ့ အပြုအမူတွေ လုပ်လိုက်ကြတဲ့ အကြမ်းဖက်မှု့ အနီးအနားရွာတွေကလည်း ပစ္စည်းတွေဝင်ယူသူယူ မိတ္ထီလာမြို့ရှိ အင်းဝဘဏ်ကို ဖျက်ပြီးဝင်ရောက်မယ်လုပ်ကြလို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက တားနဲ့ သြော် မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာတွေပါလားကွယ်။ ပြီးတော့ ဒီကာလာလောက်မှာ ဖေ့ဘုတ်ကို အသုံးပြုများခဲ့တော့ share ကြပါတယ် ကုလားမကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေ၊ ၉၆၉ ဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်ကြပါ စသည်ဖြင့်ပေါ့ အဲဒါတွေကလည်း လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု့ ဘာသာရေးခွဲခြားမှု့ စိတ်တွေကို ပိုပြီးတက်ကြွစေတဲ့ နည်းလမ်းအထောက်အပံတွေပါဘဲ၊
ဗျိုင်းရှေ့က ပျံကာပျံကာရယ် မိုးဆုံးဆုံးချုပ်ပေါ့သမီးငယ်ရယ်
အိပ်ပါတော့ကွယ် ကြောင်ကြီးကိုက်လိမ့်မယ် အိပ်ယာကနိုးရင်ကျောင်းသွားရအုံးမယ်
မျက်စိမှိတ်ထားကွယ် နတ်ရေးတဲ့ အိမ်မက်မက်စေမယ် …………. ´´ လို့ သားချော့တေးလည်း အေးဆေး မဆိုနိုင်တော့ဘူး ဟိုနေရာဆူဆူ ဒီနေရာ အုန်းဒိုင်းနဲ့ ပျက်လိုက်ကြတာ လောင်လိုက်ကြပြန်တဲ့မီး ပြေးလိုက် ကြရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ပါ။
ဆိုလိုချင်တာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တယ် ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေ က ရော့ အင့် ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်မှ သိမြင်လာတဲ့ တရားပါတဲ့။
ဒါဆိုရင် “အရှေ့အရပ်၌ရှိသော အနန္တစင်္ကြ၀ဋာ အနန္တသတ္တ၀ါတို့ ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ ကြောင့်ကြခတ်သိမ်း ငြိမ်းကြပါစေ ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ နှလုံးစိတ်ဝမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။ …………. စတဲ့မေတ္တာပို့တွေက ကြားရတဲ့သူတွေ အထင်ကြီးအောင် ဖွင့်နေကြတာလား ရွတ်နေကြတာလား အကယ်၍ သာ အဲဒီထဲက ရွတ်ဆိုတဲ့ စာသားတွေရဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သေချာသိရှိကြပြီး ကိုယ်စိတ်သန္တန်မှာလည်း ကိန်းဝပ်နေကြတယ်ဆိုရင်ဖြင့် အလွန်ကိုသာယာငြိမ်းချမ်းသော လောကတခွင်မှာ နေထိုင်ခွင့်ရကြတဲ့ လူသား တွေဖြစ်ကြမှာဘဲလို့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်။
မည်သည့်လူမျိုး မည်သည့်ဘာသာဝင်ကိုမဆို မြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ အနန္တစင်္ကြ၀ဋာ အနန္တသတ္တ၀ါ အဖြစ်သာ မေတ္တာရှေ့ထားရမယ်ဆိုတဲ့ တရားတော်လာ စကားသံဟာ ခင်ခ နားထဲ အထပ်ထပ်ကြားယောင် နေမိပါရဲ့ ဗျာ။
( ကွန်မန့်ဆွေးနွေးမှု့ များကို အကယ်၍ ခင်ခ ပြန်လည်ဆွေးနွေး ကျေးဇူးတင်မပြုနိုင်ခဲ့လျှင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ကြိုတင် တောင်းပန်ထားလိုက်တယ်နော်)
ဂဇက်ကို သံယောဇဉ်မကုန်သေးတာ ဝမ်းသာပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ…
မိတ္ထီလာကိစ္စက အတော့ကို အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်လိုက်တာဗျာ…
တစ်နေ့တနေ့ ဖတ်ရမြင်ရ စိတ်ချမ်းသာစရာ တစ်ကွက်မှမရှိပါဘူး..
ဗြဟ္မစိုတရား နည်းပါးလိုက်ကြတာဗျာ… ဟမ်း… သူကြီးပြောတဲ့…
“ထိုက်တန်ရာ အစိုးရကိုသာရတယ်” ဆိုရင်… ငြင်းမိပါ့မလားတောင်မသိဘူး…
မနေ့က အဲဒီ မိတ္ထီလာဘက်ကို ခဏရောက်ဖြစ်တုန်း မြင်ရ တွေ့ရ ကြားရ တာတွေကြောင့်
” မနေ့က အဲဒီ မိတ္ထီလာဘက်ကို ခဏရောက်ဖြစ်တုန်း ”
ဒီလို အချိန်ကြီး မိတ္ထီလာ သွားတယ် ။
မိတ္ထီလာက တပ်တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်တို့အလုပ်က တည်ဆောက်ရေးဆိုဒ်တစ်ခု
၀င်လုပ်နေတာ ခဏရပ်ထားရမှာမို့ ကျွန်တော်အလုပ်က ၀န်ထမ်းတွေ ပစ္စည်းတွေကို သွားပြန်ခေါ် သိမ်းရတာမို့ မဖြစ်မနေရောက်ရတာ အဘဖောရေ။
ကိုခင်ခပြောတာလည်း အဟုတ်ဗျ အဲမှာ ကျတော်အမျိူးတွေ ရှိတယ် ကျတော်တော့ စိတ်ပူနေရတယ်ဗျာ။
မောင်တုတ်ကြီး အလွတ်တွေ များများလာပြီဗျို့
မောင်တုတ်ကြီး … မပေါက်ဘူးလေးပေါက်ရေး နဲနဲ ဝေးတယ် ကျနော်က (A:သဂျီး က ကျွန်တေိာလို့ မပြောသပ့်ကြောင်းရေးထားလို့ ကျနော် လို့ရေးလိုက်တာ.. )
(Credit: Aung Aung Myo)
“မိတ္ထီလာမြို့ရှိ အင်းဝဘဏ်ကို ဖျက်ပြီးဝင်ရောက်မယ်လုပ်ကြလို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက တား”
အင်းဝဘဏ်ဖျက်မယ်ဆိုတော့မှ လုံခြုံရေးက တားတာလားဟင်……? :chee:
Thanlwinoo ရေ ခဏတာ မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကို ရေးလိုတဲ့ပိုစ့်ရည်ရွယ်ချက်လေး မြင်သာအောင် ကွက်ရေးပြတာလေ။
ကိုယ်လိုရာကို ဆွဲတွေးနေရင် တဖက်သတ်ဆန်လိမ့်မယ်……… ( ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ခိုင်ထူး သီချင်းမှာ )
တောမီးလောင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ် လို့ ကြားဖူးတာပဲ။
အနိဌာရုံတွေ မမြင်ရ မကြားရရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ ကိုခင်ခရယ်။ :buu:
၈၈ အဖြစ်မျိုး ထပ်ဖြစ်လုနီးနီး ပါပဲ ။
အိုဘယ့်နိုင်ငံရေး
အိုဘယ့် ခြုံလုံရေး ( ခြုံထဲကိုပဲ လုံအောင်လုပ်လို့ )
အိုဘယ့်……
တရားတော်ရဲ့ အနှစ်သာရ အတော်များများကို မယူဘဲ
အပေါ်ယံ လောက်ကိုသာ လိုက်နာကြသူတွေ၊ များနေသရွေ့တော့
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အာဃာတတွေကို မလျှော့ရင်
မီးလောင်ရာ လေပင့်သူတွေနောက် လိုက်နေသရွေ့
ကိုကိုခ ရေ ကျွန်တော်ကြားဖူးတာက ကိုယ့်ဆီမှာ မေတ္တာမရှိပဲ မေတ္တာပို့လို့ မစူးရှဘူးတဲ့ဗျ….။ အတော်များများက မေတ္တာ ပို့သာရွတ်နေတာ ကိုဘာရွတ်နေလို့ရွတ်နေမိမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး……။
ကိုခ အသံဆက်ကြား နေရတာ ကတော့ ကြည်နူးဖွယ်ပါဘဲ။
နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်ကြတာလဲ ပါမပေါ့
လေးခ ပို့ စ်ကို မြင်ရလို့ ဝမ်းသာပါအိ
အမ ပဒုမ္မာရေ အခုမီးက ဒေါသမီး လောဘမီး တွေ မို့ ပြန်ပြေးခဲ့ရတယ်လေ။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုခင်ခ ရေ ဘာသာရေးထက် အခုမီးက ဒေါသမီး လောဘမီး တွေပါ
မိတ္ထီလာ .. ကန်ဘောင်ရိုးပေါ်က …
ဖားပါရင် .. တစ်ကောင် နှစ်ကောင် ပေးပါလို့ …
သားမောင်ကို … အိုအို အေးကာ အိပ်ပါတော့ …
သီချင်းဆိုကာ .. အမေလည်း မသိပ်နိုင်တော့ဘူးကွယ် …
comment လေးတွေကိုပါ လေ့လာချင်လို့…..
နား ၀မှာ… မသက်သာ တော့တဲ့အဖြစ်တွေ…..
မပြောချင်တော့ပါဘူးကိုခင်ခရေ။ လက်ပန်တောင်းတောင်ပြီးသွားတာနဲ့မိတ္ထီလာကိစ္စကချက်ခြင်းဖြစ်လာတာပဲ။ နောက်လဲဆက်ရန်ရှိသေးတယ်ထင်ပါရဲ့။ ၀ဋ်ပဲ။
သူများဘာသာမှာဂဏန်းသုံးလုံး ရှိနေတာကို လိုက်တုတာမို့.. ရှက်စရာဗျာ.. :chee:
ကိုခင်ခ စာလေးတွေ မျှော်နေပါတယ်.. :hee:
ဟုတ်ပ ကိုကြီးမိုက်ရေ –
၉၆၉ ဆိုတဲ့ဂဏန်း သုံးလုံးက အခြားဘာသာရဲ့ ဂဏန်းသုံးလုံး နောက်က လိုက်ပြီး တုပလုပ်တာမျိုးလို့ ယူဆလို့ အစထဲက အထင်မကြီးခဲ့ဘူး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်တွေ မှာ ဟိုးအရင်ထဲက အရဟံ ဆိုတာမျိုး၊ ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ဆိုတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ရေးခဲ့ကြ ပြီးသားပါ၊ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့ အခြားဘာသာရဲ့ အသိုက်အမြုံဖျက်ပါ အခြားဘာသာကိုသတ်ပါ အခြားဘာသာရဲ့ အကျိုးစီးပွား ကို အားမပေးနဲ့ ပျက်အောင်လုပ်ပါ လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားခဲ့တာမျိုး မရှိဘူးနော်၊ အဲလို မိစ္ဆိရစိတ်တွေ မောဟ စိတ်တွေကို မလုပ်သင့် ဘူးတောင် ဟောကြား ညွှန်းပြခဲ့တာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်လေ။
ဥုံ ဆိုတာလဲ ဟိန္ဒူ ဘုရားကို ရှိခိုးတာဆို… ခပ်ငယ်ငယ်က မင်းသိင်္ခ တွေဖတ်ပြီးလိုက်လိုက်လုပ်နေတာ…
ရွာကနေ ပြောင်းမသွားတာမို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်…
မိတ္ထီလာ ကိစ္စကတော့ မရိုးသားဘူးထင်ပါတယ်…
မြို့တိုင်း ရွာတိုင်း အေးချမ်းစေချင်ပါတယ်…
ဘာသာရေးကြောင့် သတ်ကြဖြတ်ကြတာဟာ ဘာသာမရှိသူသာ ဖြစ်လိမ့်မယ် ဘယ်ဘာသာကမှ ဘာသာမတူသူကို သတ်ကြေးလို့ မဆိုပါ ဘယ်ဘာသာမှ ယုတ်ညံ့မှုကို လမ်းမညွှန်ပါ။ ခု မိတ္ထီလာ မှာ သတ်ကြဖြတ်ကြတာတွေဟာ ယုတ်ညံ့သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်ဖဲဖြစ်ပါတယ်